I-Wiper Blade ekhethekile
Amatebhe Wiper Blade
I-Wiper Blade engemuva
TRUCK & IBHASI WIPER Blade
I-Universal Wiper Blade
I-Ningbo Chinahong Traffic Equipment CO., Ltd. (I-NingBo IDA Auto Parts Co., Limited) iwebhusayithi iku-inthanethi
I-Ningbo Chinahong Traffic Equipment CO., Ltd. (I-NingBo IDA Auto Parts Co., Limited) iwebhusayithi yethulwe. Abakhangisi bamukelekile ukuza babonisane futhi bathenge. Inkampani yethu inomkhiqizi oqeqeshiwe wamawiper wezimoto nezesekeli iminyaka engu-15, okukhipha minyaka yonke ezintathu ngaphezulu ...
Umhlahlandlela wokugcinwa kwe-Wiper?
1. Uma usebenzisa i-wiper ukususa uthuli ebusweni besikrini sangaphambili ngosuku libalele, qiniseka ukuthi ufafaza amanzi engilazi, hhayi omile. 2. Kukhona okunye ukungcola okunenkani nokuqinile engilazini, okufanele kuhlanzwe ngesandla. Lezi zinto zingalimaza kalula i-wiper blade futhi zibangele ukuthi i-wiper blade ingavuleki ...
Yiziphi izinhlobo zama-wiper?
Kunezinhlobo ezimbili zama-wiper. Enye ye-wiper evamile yezikhathi, okuyi-wiper evame kakhulu. Kunezigaba ezintathu kuya kwezine, ezingalungiswa ngumshayeli ngokuya ngemvula nesimo sokubona; enye inzwa yemvula. , Isetshenziswa kakhulu phakathi nendawo ne-hig ...
Ucingo+86 574-8655 0966
IkheliMinlian Village, Guisi Street, High-Tech District, Ningbo Idolobha, Isifundazwe Zhejiang, China
I-Wiper Blade ekhethekile, Ibhasi Wiper Blade YeVolvo, I-Ford Edge engemuva Wiper Blade, Uhlobo Olukhethekile Wiper Blade, I-Wiper yesikrini sangemuva semoto, Isivikelo sangemuva seWindshield,